Cayaaraha Olombikada 2020 ee Tokyo
Talaado 26 October 2021
Wareysi: Orodyahan Nageeye oo sharraxaya qaabkii uu u caawiyay Bashiir Cabdi
Cabdi Adan Nageeye oo kaalinta labaad ka galay ee oradka dheer ee Marathonka adduunka ayaa wareysi gaar ah siiyey VOA, kaaas oo uu ku sharraxay sababta uu u caawiyay Bashiir Cabdi oo u ordayay dalka Belgium oo isna kaalinta sedexaad ka galay tartankaas.
Soomaalida Canada oo u dabbaaldegtay guusha oroyahan Maxamed Axmed
Maxamed Axmed oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya, balse cayaaraha Olombikada ee ka socda magaalada Tokyo ku matalaya Canada ayaa u suuragaliyay dalkiisa in markii ugu horreysay taariikhda orodka 5000 mitir ee ragga ay ka gasho kaalinta labaad, isagoo ku guuleystay billadda qallinka ah
Mareykanka oo ku guuleystay billadda dahabka ah cayaaraha Kubbadda Koloyga ee Olombikada Tokyo
Xulka Qaranka Kubadda Koloyga Mareykanka ayaa ku guuleytay billadda dahabka ah ee cayaaraha Olombikda, kaddib markii 87-82 uga badiyeen dhiggooda waddanka Faransiiska cayaartii kama dambeysta aheyd ee koobka Olobmikada Tokyo.
Orodyahan Cali Iidow Xasan oo Soomaliya ku matalayay oradka 1500 mitir ee cayaaraha Olombikada adduunka oo ka socda magaalda Tokyo ee waddanka Japan ayaa galay kaalinta 10-aad.
Xubno ka mid ah kooxda Soomaaliya ee Tokyo oo karantiil ku jira
Nuux Ibraahim Axmed oo ah tababaraha orodyahanka Soomaaliya u matalaya ciyaaraha Olombikada adduunka ee Japan ayaa karantiil ku jira isaga iyo qaar kale oo wafdiga Soomaaliya ka mid ah.
Simon Biles oo ka hartay tartanka kooxaha ee Olombikada
Xiddigta Mareykanka ee Simone Biles ayaan difaacan doonin biladdeeda dahabi ah ee cayaaraha Olombikada kadib markii ay ku dhowaaqday inay ka baxday tartanka kooxaha ee dhacaya Khamiistsa, si ay diiradda u saarto caafimaadka maskaxdeeda.
Ramla Cali oo ah gabadha Soomaaliya ku mataleysa cayaaraha feerka Olombikada ee Tokyo ayaa looga adkaaday dhibco kadib markii ay is wajaheen gabar kale oo ka socotay dalka Romania.
Wareysi: Tartamada kusoo fool leh Soomaaliya ee Olombikada Tokyo
Kooxda Soomaalia waxaa ka mid ah Ramla Ali oo beri oo isniin ah la feertami doonto gabar ka socoto dalka Romania.
Wareysi: Xoghayaha Guud ee Olimbikada Somalia oo Tokyo ku sugan
weriyaha VOAda Ibraahim Cumar Baafo ayaa khadka telefoonka ee Tokyo kula xiriiray Maxamed Cabdow Xaajo oo ah Xoghaya Guud ee Guddiga Olombikada Soomaaliya, kuna sugan garoonka ay ka dhacayso xaflada furitaanka ciyaaraha.
Ciyaarihii Olimbiga oo ka furmay Tokyo
In ka badan 11 kun oo ciyaartooy oo ka socda 206 waddan oo caalamka ah ayaa lagu wadaa in ay ka qeybgalaan ciyaaraha sanadkaan, iyada oo dalalkaasi ay ku jirto Soomaaliya oo kaga qeybgaleysa laba xiriir oo kala ah orodka iyo feerka.
Brisbane oo loo xushay inay marti-geliso Olombikada 2032
Magaalada Brisbane ayaa loo xushay in ay martigeliso ciyaaraha olombikada ee sanadka 2032-da. Magaaladan ku taalla dalka Australia ayaa guusheedu ahayd mid la sii filayay maadaama ay ahayd halka magaalo ee ay sharraxeen guddiga olombikada ee IOC si looga baaqsado tartan.